Mogadishu Journal » Wararka Xanta Ah: Real Madrid ayaa ku dhow Kylian Mbappe, Barca ayaa isha ku heysa labada ciyaaryahan ee Arsenal
Miyuu mustaqbalka Kylian Mbappe ku dhow yahay xal?
Mbappe ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, weeraryahanka Paris Saint-Germain ayaana ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo caasimadda Faransiiska.
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay la soo wareegto.
SHEEKADA BADAN - MADRID OO KU DHAWAN HESHIIS MBAPPE?
Real Madrid ayaa ku sii dhawaanaysa xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe, sida laga soo xigtay bogga hore ee wargeyska Marca.
Mbappe ayaa ku jira sanadkiisii ​​ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa PSG waxaana lagu soo waramayaa inuu cadeeyay inuusan dooneynin inuu dib ugu saxiixo Paris.
Muddo dheer ayaa loo maleynayay inuu ku biirayo Madrid, baacsiga kooxda LaLiga ee Mbappe ayaa qarka u saaran inuu galo marxalad muhiim ah toddobaadkan.
Muuqaalka Daaqadda Kala iibsiga, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheeganayaa Liverpool inay isku dayi doonto inay Mbappe kula soo saxiixato beeca xorta ah dhammaadka xilli ciyaareedka 2021-22.
- Wararka Sport ayaa sheegaya in Barcelona ay isha ku heyso labada Arsenal Alexandre Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang iyagoo doonaya inay dib u dhisaan ka dib bixitaankii Lionel Messi ee PSG.
- Inter ayaa indhaha ku heysa kabtanka Napoli Lorenzo Insigne laakiin waxay rabaan qiimo dhimis xiddiga Talyaaniga ah, Sky Sport Italia ayaa sidaas leh. Napoli waxay Insigne ku qiimeysaa ku dhawaad ​​-30 25-30million iyadoo qandaraaskiisa uu ka harsan yahay hal sano. Lazio Joaquin Correa, weeraryahanka Atalanta Duvan Zapata iyo dareenka Fiorentina Dusan Vlahovic ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa Inter.
- Sport Italia ayaa sheegtay in Tottenham ay wadahadalo kula jirto Fiorentina daafaca dhexe Nikola Milenkovic, oo lala xiriirinayo West Ham. Spurs ayaa sidoo kale dooneysa xiddiga Fiorentina Vlahovic, sida laga soo xigtay Sport Italia.
- Sida laga soo xigtay Cadena SER, Antoine Griezmann wuxuu u furan yahay inuu ku laabto Atletico Madrid xilli-ciyaareedkan ka baxsan. Griezmann ayaa u bedelay Atletico kooxda Barca 2019.
- Luka Jovic ayaa go'aansaday inuu doonayo inuu amaah ugu biiro Inter, halkii Nerazzurri Siamo Noi. Kooxda ka soo horjeeda Madrid ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Eintracht Frankfurt, Sampdoria iyo Genoa.
-Manchester United, Chelsea iyo Manchester City ayaa ku raad-jooga Metz 18-jirka qadka dhexe Pape Matar Sarr, sida ay qortay Daily Mail.